Kuongorora kwekudyara: kupi? | Ehupfumi Zvemari
Sezvo zhizha rino, vatengesi vari muchinzvimbo chekusarudza kubva kune dzakasiyana siyana nzira dzekuziva kuti vawane chimiro chemari yavo. Iko iko kutsva kuri kuwana kukosha kwakakosha teknolojia mazano inopihwa nemasangano emari kune vatengi vavo. Saka kuti nenzira iyi, iri basa rekutanga rinogona kuitwa kubva chero kupi uye chero nguva, kunyangwe iwe uri pazororo munzvimbo iri kure kure kune kwaunogara kuenda. Nekuti pakupera kwezuva izvo zvazviri ndezvekuita kuti hupenyu hwako huve nyore muhukama hwako nenyika yepasita yemusika.
Izvo hazvigone kuve kuti unofuratira makotesheni kwenguva yakati rebei kana shoma, nekuti chiito ichi chinogona kuunza kushamisika kusingafadzi kune zvako zvaunofarira. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kurasikirwa chikamu chakakosha kwazvo chenzvimbo dzako dzakavhurika mumisika yemari. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunyatsoziva izvo zvinogona kuitika nemari yako mumusika wemasheya. Nekuti kana zvaive zvakakodzera kuita kutengesa kwakazara kana kusarura iyo iyo yaunogona kuita kuti ako ekudyara abatsire. Uye zvechokwadi, zano rakanakisa rinobva pakutarisisa kwakaringana mashandiro aripo kusvika panguva iyoyo.
Kubva pane akajairika mamiriro, nhanho yekutanga kuenda kunzvimbo dzekuwana ruzivo dzinosvikika kwauri kubva pakutanga. Hapana mubvunzo kuti sisitimu inoshanda kwazvo inogadzirwa kuburikidza nekubhengi pamusoro mutsetse sezvo ichikupa iwe ruzivo munguva chaiyo pamitengo yese yemakuru indices epasi rese. Kune rimwe divi, zvinokutendera kuti utore chero mhando yekushanda panguva dzese dzegore, kunyangwe panguva yezororo. Kubva pane yakapusa laptop kana nharembozha iwe unotora ruzivo kubva kumahombekombe, pekugara kwako kwechipiri kana chero imwe nzvimbo.
2 Kubva paInternet nekukurumidza
3 Shandisa migero yakakodzera bhegi
4 Zvikumbiro zvekutengesa pamusika wemari
5 Inotarisa pane indices indices
6 Investor mabhenefiti
Kana nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho iwe usingakwanise kuwana iyo tekinoroji nzira, usanetseka zvakanyanya nekuti iwe uchagara uine zviwanikwa zvemashoko enhau, kunyanya iwo akasarudzika Mapepanhau ese epepanhau renyika anopa ruzivo nezve mutengo wekuchengetedzwa yemari inoshanduka-shanduka, kunyange hazvo mamwe acho achingopa avo vakanyorwa paIbex 35. Chero zvazvingava, ichave ruzivo chete, isingatore danho rekushandisa mukutengesa kana kwenguva pfupi-pfupi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hauzombove neruzivo munguva chaiyo.
Kune rimwe divi, akanakisa zviwanikwa anowanikwa kuburikidza neInternet. Izvi zvinodaro nekuti chikamu chikuru chemusika wemasheya uye nhepfenyuro yezvehupfumi inopa izvi mukana, zvichiratidzawo iyo kondirakiti vhoriyamu, mashoma uye ma maximums echikamu chega chega chekutengeserana, pakati pemamwe ma parameter erudzi urwu rwemashoko. Kusvika padanho rekuti ichave iri sarudzo yakanakisa kuendesa stock stock chero nguva yakapihwa. Kwete pasina, hapana chaunoshaya kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo neakanakisa esarudzo kubva zvino zvichienda mberi. Pamusoro pemimwe miitiro yechinyakare yakave isingachashandi pamabasa aya mubazi rekudyara.
Kubva paInternet nekukurumidza
Ehezve, imwe yemhinduro dzinoshanda zvakanyanya idzo diki nepakati-hukuru varimi vane iyo inopihwa nhare mbozha. Ivo vanokwanisa kuita kwavo mashandiro nerusununguko rukuru uye kunyange kuchinjika uye kazhinji yenguva munguva chaiyo. Kwete chete mune zvakajairika misika yequity, asi nekusiyana izvo zvinowedzerwa kune ramangwana uye sarudzo dzezvibvumirano mumisika yemari MEFF (Mari yemari yeSpain yeramangwana musika) uye Eurex (yeEuropean yemari zvigadzirwa zvigadzirwa). Nemitengo inogona kuve yakaderera pane iyo inotengeswa mumatanho echinyakare.
Chero zvazvingaitika, iyi nzira yekuwana yekutengesa pamusika wemasheya inonyanya kukodzera kune vanhu vanogara vari kure nemisha yavo. Semuenzaniso, mahofisi ehunyanzvi, vashandi vehurumende kana nzvimbo dzakakosha kwazvo dzebasa. Nekuti mukuita, ivo vanofanirwa kuziva nekukasira kwakanyanya mamiriro emabasa avo. Kwete chete maererano nekotesheni yemitengo yavo, asiwo mashandiro ekutenga nekutengesa masheya pamusika wemari. Hapana chinhu chiri nani kupfuura chiteshi chinokurumidza kugutsa uku kudiwa. Kwete pasina, iwe hausisiri sezvawakaita kwemakumi emakumi emakore kwawaifanira kuenda kune yako Bazi rebhangi kune chero mhando yemanejimendi pane ako ekudyara.
Shandisa migero yakakodzera bhegi
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuziva kuti aya magero ari nyore kushandisa uye anotendera mushandisi runyararo rukuru rwepfungwa mune ako ese mashandiro. Saka zvinoita kwazvo kuita mune zvese Nguva dzezororo, semuenzaniso muzhizha, Isita kana Kisimusi. Uye, pasina chero mhando yemakomisheni kana kubhadharisa kubhangi kana mapuratifomu emari anotarisira kushambadzira ichi chigadzirwa chemusika wemasheya kana sevhisi. Kwete pasina, usakanganwa kuti hauzokwanise kushandisa zvakajairika zvigadzirwa uye mupfungwa iyi iwe unofanirwa kutora mukana kune ese mabhenefiti ayo new ruzivo ruzivo rwekupa iwe panguva ino.
Kune rimwe divi, iyo mapuratifomu emari uye kuti kuburikidza nemaapplication vanokupa iwe masevhisi ayo anogona kuve anonakidza kwazvo kuti iwe uise mari yako mumisika yequity. Ndokunge, shure kwezvose, chii chinosanganisirwa mune chero mhando rezvekudyara zano. Chokwadi, idzi ruzivo ruzivo ndidzo dzinopa ruzivo rwakakodzera nguva pamisika yemari yepasi rose. Kusvika pakuti ivo vanokwanisa kukupa iwo madhairekitori ekupinda kana kubuda mumisika nechisarudzo chakakura.
Zvikumbiro zvekutengesa pamusika wemari
Hapana mubvunzo kuti iwe uri zvishandiso yakagadzirirwa seimwe yeanodiwa makodhi e vadiki vemari uye kuti ivo vanoshandiswa kushandisa izvi zvishandiso kune zvimwe zviitiko muhupenyu hwavo hwega uye hwehunyanzvi. Ehezve, ndiyo imwe yenzira dzaunofanirwa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi, kana iwe uchida kuwana zvirinani zviripo pane ese mashandiro aunoita. Kwete chete mumusika wemasheya, asi zvinopesana, mune chero hupfumi hwakatengwa hwakaenzana sechinangwa chayo. Nekuti pamusoro pese iwo mukana webhizimusi pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi zvekufunga uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Aya matekinoroji mapuratifomu anokupa iwe unoshamisa mukana wekutsvaga zviwanikwa zvitsva mumisika yemasheya. Iwe haugone kukanganwa kuti kazhinji chishandiso chakanangiswa kune vanhu vanofarira tanga mumusika wekutengesa. Kunyangwe ivo vachishandiswawo kune mamwe marudzi ekudyara, kunyangwe iine dzimwe nzira dzakasarudzika uye dzinogona kubva pano poindi yekutorwa dzinoonekwa seyakaomesesa mafomu. Kwamunogona kupinda chero mhando yekushanda, kunyangwe kushanda nezvinhu zvakasvibirira kana simbi dzakakosha. Munyika yezvishandiso, pane nzvimbo yemarudzi ese emari, kwete chete mumusika wemasheya.
Inotarisa pane indices indices
Imwe yemipiro yake yakakosha ndeyekuti izvi zvinoshandiswa zvinogona kuchinjirwa kumarudzi ese ezviitiko, kunyangwe izvo zvishoma zviongororwe newe. Mupfungwa iyi, izvi zvishandiso zvemadhijitari zvinotarisana nematanho akakosha kwazvo pasi rese. Zvakadai seIbex 35, Eurostoxx 50 kana Dow Jones. Kune rimwe divi, chikamu chakanaka cheaya matekinoroji maturusi anoitirwa Nyanzvi muhomwe. Kune izvo zvavanopa izvo zvakawanda zvehunyanzvi zvemukati kuitira kuti vagutse zvavanoda chaizvo uye kubva kune chero mhando ripi zano rezvekudyara. Uye izvo izvozvi zvaunogona kuva nazvo kubva kumakomputa maturusi ako kana kubva kumatekinoroji matsva.
Paunenge uchiita mari, hapana mubvunzo kuti iwe unogona kuvimba nehunyanzvi hutsva. Chokwadi, pane akasiyana nharembozha kunyorera izvo zvechokwadi gonesa sarudzo dzauchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Uye zvakare, ivo vanokuraira iwe pane iyo kusarudza yakanakisa mari yemari kwaungaite kuti zvinhu zvakaunganidzwa zvibatsire. Kazhinji, vanhu vanoisa mari vanhu vebhizimusi, saka matekinoroji matsva ave rubatsiro rukuru kwavari pakuita sarudzo, kudyara mari uye kugadzirisa ruzivo nguva dzese.
Chii chaunogona kuwana nemapuratifomu akakosha? Zvakanaka, vane sarudzo yekuwedzera zviyeuchidzo, kuvhura ruzivo, nhoroondo yekutengesa kana mukana wekuwedzera mhosva uye zvikamu zvezvikamu. Kunge makomisheni uye mari dzinotaurwa nemasangano makuru emari. Iko imwe yemabhuru makuru aunogona kuwana ndeyekuti ivo vanopa yakakura simulator ye Android bhegi. Kunyangwe zviripo zveIOS, Android, Windows Phone uye BlackBerry. Hazvishamisi kuti ivo vanozivikanwa nekukwirisa kushanduka kuti vashande nechero hurongwa hwekushandisa.
Kune vane ruzivo rwevatengesi, ivo vanofanirwa kutsanangudza zviyeuchidzo zvehunhu hwatinotevedzera kazhinji, chinhu chinonyanya kubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuongorora kwekudyara: kupi?